Global Voices teny Malagasy · 1 Janoary 2019
01 Janoary 2019
Tantara tamin'ny 01 Janoary 2019
Azia Atsinanana 01 Janoary 2019
Fialantsasatra goavana ny Taombaovao ao Korea. Mody an-tanindrazany ny vahoaka, mivavaka amin'ireo razambeny, mivory miaraka amin'ireo havana ela tsy hita. Ankehitriny, namokatra ‘Soritr'aretina eo amin'ireo Vehivavy Mpikarakara Tokantrano’ ny Taombaovao noho ny hamafin'ny asa. Kanefa ho an'ny vehivavy ihany ve izany? Tsia. Misy koa ny Soritr'aretin'ny Taombaovao eo amin'ny lehilahy.
MasoArabo: Tsia ho an'ireo Bilaogy ‘Manafintohina’
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 01 Janoary 2019
Mampirisika ireo mpanoratra bilaogy hitatitra ireo bilaogy 'manafintohina' ny Firaisamben'ny Bilaogera Arabo. Ny tanjona amin'izany dia ny hanapahana ny fihanaky ny fitaovana manafintohina anaty aterineto, izay lazain'ny firaisambe fa mandrahona ny fomba fisainantsika, ny fitsipi-pitondrantenantsika ary ny soatoavintsika.